Uyazi njani iphasiwedi yefayile -Geofumadas
Indlela yokwazi iphasiwedi yefayili
NgoJulayi, 2009 ezintsha, Internet kunye neBlogs
Kukho izixhobo ezininzi kwi-Intanethi ekuvumela ukuba ufumane iphasiwedi eyimfihlo, okanye njengoko siza kubiza namhlanje: iphasiwedi yefayili, andizenzeli lo thumela ukukhuthaza inkohlakalo; kunokuba uchaze umngcipheko okhoyo ukuba ukholelwe ukuba yonke idatha yethu ikhuselekile ngendlela elula emva kwegama luthando ngeso lesibini kwibanga lesikolo.
Kule meko ndiya kubonisa umzekelo LasBit Corp, ukuba umntu omnye ufuna ixesha ngenxa yokuba wayelibale igama leyintombazana ayeyisebenzisayo ukukhusela ifayile yakhe ye-Excel, okanye umqeshwa onobungozi ushiye isethi yedatha enenjongo embi ekhuselekile, nantsi indlela yokuphuma.
1. Iphasiwedi engalunganga
Kucacile ukuba kobu bomi kufuneka sisebenzise ngaphezu kwephasiwedi enye, ukukhusela; Akunakwenzeka ukuba uyisebenzise ukufikelela kwiforum ngokwenza amagqabantshintshi, kunokuba ufake iakhawunti ye-imeyile, i-Facebook okanye ikhadi lekhredithi. Kwaye yile nto esenza siphulukane nengqondo kuba kungekudala okanye kamva sinokudideka.
Amaphasiwedi akhuselekileyo ngalawo ubuncinci banamanani ali-9, kwaye la ayingawo amagama achanekileyo kwisichazi-magama, ekukhethwa ukuba aqulathe amanani kwaye, ukuba kunokwenzeka, unobumba omkhulu omnye. Oku, kuba imigaqo elandelwa kukwaphula iphasiwedi isekwe kwindibaniselwano yabalinganiswa, kokukhona bekhona, kuya kuba kudala. Akucetyiswa ukuba usebenzise ezinye iintlobo zeekhowudi, ezinje ngamagama anee-aksenti okanye iisimboli kuba ukuba ngenye imini sifumana ikhibhodi enetafile yomlinganiswa eyaphukileyo ... ukukhawuleza kunokuba nakho ukungcamla atol chuco.
2. Makhe sibone umzekelo
Le yimeko yefayile ye-Excel eyenziwe yenye yeengcali zam ukufundisa ukusetyenziswa kwefayile ye-cadastral. Ndinemvume, kuba undicelomngeni ukuba angayifumana indlela yokwaphula iphasiwedi, nantsi ke ngoku:
Ukuba yifayili ye-Excel, into ephela ndihlalayo yi-ExcelPassword kwaye ndiyazi indlela efanelekileyo:
Igrafu ibonisa iindlela ezahlukeneyo:
Ukuba yonke into oyifunayo ukuphula iphasiwedi yamaseli avaliweyo, kodwa ngaphandle kokuba ifayile ekhuselekile, kukho ukhetho oluthiwa olungeyonyani evumelayo ukuyibuyisela kwakhona ngokukhawuleza ngaphandle kwenkqubo yokufuna igama.
Enye inketho kukuba unayo ifayile ye-Excel kodwa yeenguqu ze-2003, i Ukuhlasela kweBrute Force Ndingayifumana kwimizuzu embalwa. Nangona ezo fayile zazinokhetho lokubethela, ukuba babenegama eligqithisiweyo elide nelinzima alisebenzi.
Kwaye kukho enye iifayile ze-2007, apho i-Ofisi eyongezelelekileyo iyanzima indlela yokubhala (I-AES 128 encryption), apho umsebenzi uhamba ngokukhawuleza kwimeko yokuba iphasiwedi ide kwaye iyinkimbinkimbi.
Ukulandela i-wizzard, unokunika iimpawu ezithile, ezifana nolwimi okulindeleke ukuba uphendule amagama, ubuninzi benani labalinganiswa, amagama okuqala nokuphela, ukuba ufuna ukucinga iinqununu okanye iikhowudi ... nganye inketho ibonisa inani lexesha Ingathatha ukukhangela kwimizuzu embalwa ukuya kwiintsuku ezininzi.
Ukwazi umchwepheli, onokubeka amagama kuphela ngesiSpeyin, kwaye ngokoko ngokubalwa kwakhe kunokuhamba ngeelwimi ezingaphantsi kweesithandathu, apha ndihamba.
Imizuzwana ye-23 ngaphandle kweencwadi ezinkulu
Kumele kube negama le-intombi yesikolo okanye igama lomnxeba lomntu eklasini. ihehe
Kwakukhawuleza kangangokuba andabinangxaki yokufumana isikrini esishicilelweyo. Into embi kukuba andizange ndixoxe ngokubheja, nje ngumngeni onzima.
Ukuvavanya inkolelo yam, ndasebenzisa iphasiwedi efanayo kwi-akhawunti yakho ye-Yahoo, kunye nokunyuka! Kwakunjalo, kodwa ngoku ndikunilumkisile kuba andinayo injongo embi kunye neengcali eziye zenza impumelelo eninzi.
Kwakhona kunokwenzeka ukuba abaninzi banamathuba okhathaza ngeli xesha, kwaye ukuba bengenabo okwangoku, jonga uluhlu lweephasiwedi ezingatholakala kwisofthiwe. LastBit.
3. Luhlobo luni lwephasiwedi olukwazi ukuphula i-LastBit
Ayizukuba lihlabathi eligqibeleleyo, kodwa jonga ukuba kukho iimodyuli ezinokuthengwa zodwa ngokweemfuno:
Emuva (MS Backup)
Internet Explorer (Umcebisi ngezeMeko)
I-Internet Explorer (idatha ye-Autocomplete)
Imeyili (POP3) igcinwe kwideskithophu
Ezinye iifayile okanye iinkqubo
Mthetho! (ukusuka eSyantec)
I-SHA-1 (i-Hash Algorithm ekhuselekileyo)
MD4 kunye ne-MD5 Algorithm
Andithandabuzi ukuba ezi ntlobo zezicelo zinokuba sisisombululo kwingxaki yeshishini, njengoko benditshilo ekuqaleni. Kodwa ndinamathandabuzo anzulu ukuba ezandleni ezingalunganga ayinakuba yingozi.
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-Silken Hotels, i-luxury nobuntu
Post Next MobileMapper 6 vrs. Juno SCOkulandelayo »